Ihowuliseyili Slow rebound memeory foam pillow withgoodprice-Rayson | Rayson
Ihowuliseyili Bamboo memory foam umqamelo kunye negodprice-Rayson
Ihowuliseyili Slow rebound memeory foam pillow withgoodprice-Rayson
Rayson kwiRayson yeNdawo yezeMizi-mveliso, eHuasha Road, eShishan, eFoshan High-Tech Zone, eGuangdong, China. Iimveliso eziphambili Ihowuliseyili Isantya esirhubuluzayo sokukhumbula amagwebu umqamelo kunye nenyama-yeRayson
Uninzi lwamashishini lusebhankini kule mveliso. Yenzelwe ukulungelelanisa uhlengahlengiso oluqhubekayo ngexesha lokuqhubeka kwemveliso, ngenjongo yokwandisa ukusebenza kakuhle kunye nokunciphisa iindleko.
I-Rayson Global Co., Ltd yintsebenziswano yase-Sino-US, eyasungulwa ngo-2007 e-Shishan Town, e-Foshan High-Tech Zone, kwaye ihlala kufuphi namashishini adumile njenge-V
Silandela ngokungqongqo iinkqubo zolawulo lomgangatho esemgangathweni ukuqinisekisa ukuba iimveliso zethu ziyahlangabezana okanye zigqithile kulindelo lwabathengi bethu. Ukongeza, sibonelela ngeenkonzo zentengiso yasemva kwexesha kubathengi kwihlabathi liphela. Siyathembisa ukuba iimveliso zithunyelwa kubathengi zikhuselekile kwaye zivakala.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye ufuna ukwazi okungakumbi malunga nathi, Tsalela umnxeba ngqo. Ukuza kuthi ga ngoku, uRayson upasile isiqinisekiso senkqubo yolawulo lomgangatho wamanye amazwe Zonke iimveliso kubandakanya imveliso yethu entsha zinikezelwa kuyilo olutsha, umgangatho oqinisekisiweyo, kunye namaxabiso okhuphiswano.
Uhlala ixesha elingakanani umatrasi wakho? Yonke imatrasi yahlukile. Ukuba uphosa ebusuku okanye uvuke ngentlungu lixesha lokuba ufumane umatrasi omtsha nokuba ungakanani na. Sincoma ukuba ujonge i-tag yomthetho kwaye utshintshe ubuncinci yonke iminyaka esibhozo. Ngaba ungandinceda ndenze uyilo lwethu okanye ndisebenzise uphawu lwam kwimveliso? Sinako ukwenza umatrasi ngokokuyila kwakho okanye ukubonelela ngenkonzo ye-OEM sifuna nje ukuba usinike imveliso yakho okanye imveliso yelogo. Ngaba ndingandwendwela umzi-mveliso wakho? Ewe, wamkelekile ukuba utyelele umzi-mveliso wethu nangaliphi na ixesha, sikufutshane nesikhululo seenqwelomoya saseGuangzhou Baiyun, kungathatha iyure enye ngemoto, kwaye sinokucwangcisa imoto ukuba ikulande.